Michael Keating oo war-cad kasoo saaray qaraxyadii saakay gil-gilay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Michael Keating oo war-cad kasoo saaray qaraxyadii saakay gil-gilay magaalada Muqdisho
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa cambaareeyay weerarkii argagaxiso ee maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Weerarkii saakay ayaa loo adeegsaday laba baabuur oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kuwaas oo lagu qarxiyay meel u dhaw derbiga xayndaabka ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Michael Keating ayaa sheegay in weerarkii saakay uu ahaa mid fuleynimo ah islamarkaana la doonayo in lagu argagaxiyo shacabka Soomaaliyeed iyo hay’addaha ku sugan magaalada Muqdisho.
“Argagixisada Al-shabaab waxay markale qaadeen weerar arxan darro ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof oo Soomaali ah, aqlabiyada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed way diideen xeeladahaas argagaxiso iyo in colaad iyo xoog loo adeegsado in lagu gaaro ujeeddo siyaasadeed.” Sidaas waxaa yiri Michael Keating oo ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxa uu Michael Keating sheegay in dhacdadaasi ay tahay mid naxdin leh islamarkaana ay tusaalo u tahay isku dayga naf-lacaariga ee kooxda argagaxisada ah ku doonayaan inay ku curyaamiyaan horumarka iyo siyaasadda dalka Soomaaliya.
Wuxuu hadalkiisa ku daray in hay’adaha dowladda Soomaaliyeed iyo Qaramada Midoobay aanay midnaba laga weecin doonin inay ku talaabsadaan horumar.
Ugu dambeyntii, Michael Keating ayaa tacsi u diray dhamaan qoysaskii iyo saaxiibadii dadkii ku geeriyooday qaraxyadii saakay ka dhacay Muqdisho, isagoona dhinaca kale dadka dhaawaca ah u rajeeyay in sida ugu dhaqsiyaha badan u caafimaadaan.
“Anigoo ku hadlaya magaca dhamaan bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, waxaan tacsi tiiraanyo u dirayaa qoysaska iyo saaxiibada dadkii dhintay qaraxyadii maanta ka dhacay Muqdisho, waxaana sidoo kale dadka dhaawaca ah u rajeynayaa inay si deg-deg ah uga soo kabtaan dhaawacooda” Ayuu Michael Keating hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxyadii saakay gil-gilay magaalada Muqdisho ayaa waxaa sheegatay Xarakada Al-shabaab, waxaana ay sheegeen inay ku dileen ilaa 27 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugnaa xerada Xalane iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ee UN-ta.